Dzidza kuronga muIOS 11 neaya akasarudzika makosi ekupa | IPhone nhau
Sezvo Steve Jobs akaunza iyo yekutanga iPhone makore gumi apfuura, nhare yekutaurirana nharaunda yakave neshanduko yakadzama, uye hwaro hwayo hwese hwakamira mukushandisa. Mumakore aya, vanhu vazhinji vakatora nzira yekushandisa uye kuvandudza mutambo uye vakakwanisa kuve nyanzvi dzechokwadi vachirarama pane izvo zvavanonyanya kufarira. chirongwa uye kuvaka maapp iyo yatinonakidzwa mazuva ese pane yedu iPhone uye iPad.
Iye zvino unogonawo dzidza maitiro kuIOS mune yakasununguka uye yakapusa nzira nekuda kwesarudzo iyi yemakosi matatu aunogona kuwana pane iyo Udemy chikuva uye iyo yatinokupa iwe kunyanya kukwidziridzwa.
1 Zadzisa iOS 11 uye Swift Kosi: Kubva Zero kuenda kune Nyanzvi neJB
2 Xamarin iOS: Dzidza kubva kuKutanga kuenda kune Nyanzvi
3 Yekushandisa dhizaini kosi - maapplication - eIOS uye Android
Zadzisa iOS 11 uye Swift Kosi: Kubva Zero kuenda kune Nyanzvi neJB
Nedzidzo iyi iwe unozodzidza kuronga zvako zvaunoshandisa nemitambo muIOS 11 ye iPhone ne iPad uchishandisa iyo Swift programming mutauro, iro suite rekuvandudza rakagadzirwa chaizvo neApple.
Iine "Yakazara kosi yeIOS 11 uye Swift" iwe uchave nyanzvi yekuvandudza padanho rehunyanzvi, kunyangwe iwe usina ruzivo rwekare mumunda. Iwe unozodzidza kushandisa Xcode 9 uye masystem ekuvandudza akadai seCoreML, MusicKit, ARKit kana PDFKit, pamwe neiyo Swift 4 programming mutauro uye nezvimwe zvakawanda kuburikidza neyekudyidzana chirongwa chekudzidzisa icho chinosanganisira Maawa makumi mashanu nemashanu evhidhiyo kuti iwe unogona kutarisa chero nguva uye nzvimbo kuburikidza newebhu, nharembozha uye kunyangwe kubva kuterevhizheni yako, pamusoro pekusanganisira zvinyorwa makumi matatu, zviwanikwa makumi mana nezvinowirirana, kuwanda kwemabasa uye kuwana kwehupenyu.
Famba iyi kosi ine yakasarudzika dhisikaundi yeve iPhone News vaverengi pano.
Xamarin iOS: Dzidza kubva kuKutanga kuenda kune Nyanzvi
Neiyo Course «Xamarin iOS» iwe unozodaro dzidza iyo huru iOS mashandiro kubva pakutanga sedanho rekutanga uye rakakosha kuti uve nyanzvi yechokwadi mukuvandudza mashandiro nemitambo uchishandisa Visual Studio yeMac software muC # programming mutauro.
Izvo zvinongodiwa kuti iwe uve neMac komputa uye ruzivo rwekutanga muC # nekuti zvese zvidzidzo zvinotanga kubva pakutanga, Pasina chero pre-yakatakura purojekiti, saka unogona kudzidza kuronga nhanho nhanho. Iko kushandiswa kwetabhu muIOS, iko kubata kwekubata, iko kutenderera chiratidzo, kuchengetedza muSQLite, iyo anchor animation, chizvarwa cheiyo IPA faira kubva kuVisual Studio, gadziriro yekuburitswa kweapp, ziviso yemuno nezvimwe zvakawanda, ivo vanongoita chete diki sampuro yezvose izvo iwe zvauchadzidza neiyi kosi.
Iyi kosi inosanganisira Maawa 5,5 ezvidzidzo zvevhidhiyo Kwaunogona kuwana chero nguva yaunoda, kumisikidza yako wega yekumhanya nhanho, uye kubva kune chero chishandiso.
Yekushandisa dhizaini kosi - maapplication - eIOS uye Android
Uye pakupedzisira, tinopa chirongwa ichi chekudzidzisa icho chauchazokwanisa kudzidza nacho dhizaini maapplication nemitambo kwete yeIOS chete, asiwo yemakwikwi, Android.
Nedzidzo iyi hauzove neruzivo rwakakosha kugadzira chikumbiro chinopindura kune chaicho bhizinesi, asi zvakare iwe unodzidza maitiro ekuita kuti iyi purogiramu ibatsire Uye zvechokwadi, iwe unozodzidza kugadzira yekudyidzana prototype iwe yaunogona kuendesa kune vako vatengi.
Iwe unozodzidza kubva pakutanga, ipapo hauzodiwi ruzivo rwemberi mukugadzirwa kwemifananidzo, kunyange ichigara ichikurudzirwa. Zvese zvaunoda iMac uye chishandiso cheIOS uye, chokwadika, iwe unonyatsoda kudzidza uye kuve unogadzira dhizaini nyanzvi kuburikidza ne zvemhando yepamusoro zvine mavhidhiyo, zvinyorwa uye zviwanikwa Supplements kune iyo iwe yauchazokwanisa kuwana kubva chero kupi uye chero nguva.
Exclusive chipo: $ 10 Maeuro Ekusimudzira kweazvino iPhone Vashandisi Anopera: Gumiguru 31. Makosi akakoshesa kusvika kumadhora mazana maviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Dzidza kuronga paIOS neaya akasarudzika ekupa makosi
Kunoyedza zvikuru, Thanks for Info
Mumwe wechitatu akabatana ne "Celebgate" nyonganiso inowoneka